दुबईमा सलमान खानको १७ वर्षकी छोरी र श्रीमती रहेको दाबी ! – Sandesh Press
July 23, 2021 290
एजेन्सी । सेलिब्रेटी ट्यागको साथ स्टारडम पनि आउँछ। तर कहिलेकाँही स्टारहरुले पनि ठूलो नामको बोझ सहनु पर्छ। कहिले काँही अनावश्यक ट्रोल बन्नु पर्छ । धेरै चोटि बनावटी कथाहरू प्रस्तुत गरेर कलाकारका विरुद्ध वातावरण सिर्जना हुन्छ।
बलिउड अभिनेता सलमान खान भाई अरबाज खानको कार्यक्रममा आउँदै गर्दा आफ्ने बारेमा खुलासा गरे । एक जना महिलाले दुबईमा सलमान खानकी श्रीमती र एक बच्चा रहेको दाबी गरिन् । सलमानले पनि यस दावीमा आश्चर्य व्यक्त गरे। सलमान खान मात्र होइन, धेरै कलाकारको बारेमा त्यस्ता खुलासहरू भएका छन्।
कहिलेकाहीं अचानक कसैले आफ्नी पत्नी, सेलिब्रेटीको प्रेमिका भएको दाबी गरेको छ, तब कसैले उनीहरूको बच्चा भएको खबर फैलाएका छन् । यी समाचारहरूमा कत्तिको सत्यता छ भनेर थाहा छैन, तर यसबारे धेरै शीर्षकहरू बनिसकेका थिए।
Prevआजबाट अनलाइनबाटै आफ्नो सवारीको राजस्व भुक्तानी र ब्लुबुक नवीकरण गर्न सकिने (तरिकासहित)
Nextकतै तपाई कै त होइन यो चमत्कारीक राशी ? जसको भूत वर्तमान र भविष्य सबै गज्ज्ब छ !
नेपाल पठाउन खाडीमा रहेका मनकारी नेपालीहरुले खरिद गरे ६०० थान अक्सिजन सिलिण्डर